Kuvhunduka Zombie! Kwayaka: kuongorora kukuru neLinux rutsigiro | Linux Vakapindwa muropa
Kuvhunduka Zombie! Kwayaka: kuongorora kukuru neLinux rutsigiro
Zombie Panic! Kunobva Yange iri mubeta kwenguva yakati rebei, asi timu yekusimudzira iri kumashure kweiyi vhidhiyo yemutambo zita yaenderera mberi uye yave kuda kugadzirira kudzokorora kukuru nerutsigiro rweLinux mune yakagadzika vhezheni, kuti munhu wese agone kuifarira.
Uyu mutambo wevhidhiyo iri munhu wekutanga kupfura, kana FPS. Asi zvakare inosanganisa kubatira pamwe kutamba uye zombie kupona. Zvakare, Zombie Panic! Kwayedza ndeye mahara, saka hazvizobhadhare iwe kana kobiri kuti uzviedze. Iwe zvakare unoziva kuti iwe unogona kuzviwana kubva kuValve chikuva, chitoro chemhepo.
Iyo purojekiti iri kufamba zvishoma, asi ichienderera kumberi, zvinova zvakanaka nhau. Iyo zombie inotyisa zita yakaonekwa muna 2007, na2008 iri zuva raakasvika paStam. Zvirongwa zvekuunza kuLinux zvaizotanga muna 2018, uye kunyangwe zvakatora nguva, mhando 3.1 Beta yakagara kwenguva yakareba kupfuura pakutanga zvayakaronga, asi zvichave zvakakodzera kumirira ...
Unogona kutoburitswa kare pakati paOctober 8 na15 gore rino, saka pane zvishoma zvasara zvacho. Iwe unofanirwa kuchengeta ziso kune Steam. Uye zvakare, hakuzove nerutsigiro chete rweLinux, kune mamwezve shanduko kana kugadzirisa senge
Mutambi Hitboxes anovandudza neakakura ekuvandudza.
Kupenya pakati pe zombie vatambi vechikwata kukwidziridza hushamwari mutambo.
Sarudzo nyowani mumutambo.
Steam Workshop kuvandudza, nezvimwe.
Nenzira, kana iwe usina kuziva, ini ndinokuudza kuti Zombie Panic! Kwayedza ndiko kuchinjiswa kwe Hafu-Life 2, mod yakavakirwa paValve's Source injini injini, semamwe mazita akawanda atora nzira imwecheteyo. Semuenzaniso, iwe unowana mamwe mazita anotorwa kubva kuHafu Hupenyu. Zvimwe zvekushandurwa izvi zvakanaka, uye zvinobvumidza kutambanudza injini yemifananidzo kupfuura zviri mumazita ekutanga.
Kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezve izvi MODs, Ini ndinokurudzira izvi database...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » Kuvhunduka Zombie! Kwayaka: kuongorora kukuru neLinux rutsigiro
GPUOpen: zvinonakidza zvishandiso zveLinux
Chrome 86 inouya neWebhuCode nyowani uye WebHID APIs, pakati pekumwe kugadzirisa